सान्जेन र रसुवागढीको सेयर पनि जनताको जलविद्युत अन्तरगत जारी गरिने « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सान्जेन र रसुवागढीको सेयर पनि जनताको जलविद्युत अन्तरगत जारी गरिने
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम जारी गरिने भएको छ । बैशाखको पहिलो सातादेखि सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागिएको शेयरका बिषयमा जानकारी गराउन ऊर्जा मन्त्रालयले १ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ ।
यसअघि उक्त आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तरगत राखिएको थिएन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा हालै बसेकोे जनताको जलविद्युत् संयोजन समितिकोे बैठकले दुवै आयोजनाको एक करोड ५४ लाख कित्ता सेयर जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २ गते ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । यस कार्यक्रमका लागि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ नारा तय गरिएको छ । सबै नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने अभियान थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो सेयर किनेर जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको सुरु गरेका थिए ।
सरकारले उक्त कार्यक्रममा सघाउ पुर्याउन सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले यसअघि नै पाँच वर्ष्भित्र १९ आयोजनाबाट तीन हजार चार सय ७९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न जनताबाट पैसा उठाउन लागेको बताएको थियो । सोमबार मात्रै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन गरी तीन आयोजना थप गरी कुल २२ आयोजना जनताको जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गतका सबै २२ आयोजनाबाट कुल तीन हजार ६ सय ४७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको पैसा लगानी गरिने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
२०७५ चैत २६ गते प्रकाशित
यस्तो आयो धादिङ जिल्लाको प्रावि तहको नतिजा, थाहा पाउनुहोस् ! कस-कसको निस्कियो नाम ?
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै धादिङ जिल्लाको प्रावि तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ
भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गर्यो धादिङसहित थप जिल्लाका प्रावि तहको अन्तिम नतिजा
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले पछिल्लो धादिङ र सिन्धुली जिल्लाका प्रावि तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको
यो हो नौबिसे–नागढुङ्गा सडक अर्थात ‘नो ओभरटेक जोन’
काठमाडौं । दशैँको बेला हुने सवारी जामलाई ध्यानमा राख्दै ठूला तथा मालवाहक सवारीसाधनलाई रातिको समयमा
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट मानपदवी पाउने यी ५ हस्तीहरु
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा पुर्याए बापत बैंक क्षेत्रमा उच्च योगदान
शिक्षक सेवा आयोगले फेरि गर्यो शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको केन्द्र निर्धारण…
धादिङमा खुल्यो ठुलो संख्यामा जागिर, यस्तो छ अवसर (सूचनासहित)
फेरि आयो प्रावि तहको नतिजा प्रकाशनको पछिल्लो अपडेट (संशोधित जिल्ला…
यो हो अहिलेसम्म प्रकाशित प्रावि तहको अन्तिम नतिजा, (संशोधित नतिजा…
होमवर्क चेक गर्ने क्रममा शिक्षकले छात्राको संवेदनशील अंगमा समाएपछि...
२२ वटा वाणिज्य बैंकले बनाए मर्जरमा जाने मानसिकता, यस्तो छ…
राष्ट्र बैंकले गर्यो १२८ बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेपछि १ सय २८ बैङ्क